Ngo-1944 kwakukho uluhlu olude lwabaJamani ababenesizathu sokufuna ukubulala uAdolf Hitler , kwaye kwakukho iinzame ebomini yamagosa amaninzi aseJamani. Kwakhona kwakukho ukwesatshiswa kukaHitler kwimikhosi yaseJamani ngokwayo, kwaye ngeMfazwe yeBili yeMfazwe engaphumi kakuhle eJamani (ngokukodwa kungekhona eMpumalanga Front) ezinye iinkokeli ezihamba phambili zaqala ukuqonda ukuba imfazwe yayiza kuphelelwa ekuphelelweni kwaye uHitler wayezimisele ukukhokela iJamani kwiintshatyalazi ngokupheleleyo.
Laba balawuli nabo bakholelwa ukuba ukuba uHitler wabulawa, ngoko ama-allies, zombini i-Soviet Union kunye neentlanga zentshona, aya kukulungele ukuxoxisana noxolo kunye noRhulumente omtsha waseJamani. Akekho owaziyo ukuba kwenzekani ukuba uHitler ubulewe ngoku, kwaye kubonakala ngathi uSalin wayengafuni ukuhamba waya eBerlin ukuze atyathele ibango lakhe lolawulo lobukhosi.
Ingxaki yokubulala uHitler
UHitler wayesazi ukuba wayengafuni ukuthandwa kwaye wathatha amanyathelo okuzikhusela ekubulaweni. Wayeguqula ukuhamba kwakhe, engavumeli ukuba iiplani zakhe zikwaziwa ngaphambi kwexesha, kwaye wayekhetha ukuhlala kwindawo ekhuselekileyo, izakhiwo ezinqatyisiweyo. Kwakhona wayelawula ngokukhawuleza inani lezixhobo ezazingqonge. Oko kwakudingeka ngumntu onokusondela kuHitler, aze ambulale ngesiphatho esingavumelekanga. Izicwangciso zokuhlaselwa zaphuhliswa, kodwa uHitler wakwazi ukuziphepha zonke.
Wayeyintlekisa kakhulu kwaye wabuya esinda kwiimvavanyo ezininzi, ezinye zazo ezaza kwi-farce.
UColonel Claus von Stauffenberg
I-clique of figures of figures eyayifuna ukubulala uHitler yamfumana indoda ngomsebenzi: uClaus von Stauffenberg. Wayekhonze kwiiprojekthi eziliqela eziphambili zeMfazwe yeBini yeMfazwe , kodwa ngexesha laseMntla Afrika belahlekelwe ingalo yakhe yokunene, iliso lakhe lasekunene, kunye namadijithi kwelinye icala kwaye babuyiselwe eJamani.
Isandla siza kuba yingxaki ebalulekileyo kamva kwinqanaba lebhokhwe, kwaye into emele ihlelwe bhetele.
Kwakukho ezinye izicwangciso ezibandakanya ibhomu kunye noHitler. Amagosa amabutho amabini aye adibanise ukubulala ibhomu ngoHitler nguBaron Henning von Tresckow, kodwa izicwangciso zawa phantsi ngenxa yokuba uHitler utshintshe izicwangciso zokuyeka le ngozi. Ngoku u-Stauffenberg udluliselwe esibhedlela sakhe waya kwi-War Office, apho uTresckow wasebenza khona, kwaye ukuba ngaba babini abazange baqalise ubudlelwane bokusebenza ngaphambi kokuba benze ngoku. Nangona kunjalo uTresckow kwafuneka alwe imfazwe kwi-Eastern Front, ngoko uFriedrich Olbricht wasebenza noStauffenberg. Nangona kunjalo, ngoJuni 1944, iStauffenberg yaphakanyiswa ukuba ibe yiColonel epheleleyo, yenze iNtloko yabasebenzi, kwaye yayifuneka ihlangane rhoqo noHitler ukuxubusha imfazwe. Wayenokufika lula ngokuthwala ibhokhwe kwaye angabikho umntu osolisayo.
Emva kokuba kuvule i-front entsha kunye nokuphumelela kwe-D-Day landings, imeko yayibheke ngakumbi kwiJamani, kwaye isicwangciso saqala ukusebenza; Uchungechunge lokubanjelwa kwakhona luchukumisa abacebisi-iqela elibandakanya abalawuli beempi ngokuqhelekileyo ngaphambi kokuba babanjwe. U-Hitler uza kubulawa, ukukhutshwa komkhosi kuza kuqhutyelwa, iiyunithi zomkhosi ezithembekileyo ziza kubamba iinkokeli ze-SS kwaye zithemba ukuba umyalelo omtsha wokhuseleko uza kuphesela imfazwe yombutho kwaye uxoxisane ngokukhawuleza kwimfazwe entshonalanga, ithemba elibi.
Emva kwemizamo emininzi yamanga, xa uSauffenberg ebenokuqhuma iziqhubhiso kodwa akazange abe nethuba lokuzisebenzisa ngokumelene noHitler, i-Operation Valkyrie yaqalisa ukusebenza ngoJulayi 20. UFauffenberg weza ukuya kwintlanganiso, waxhuma ukuba asebenzise i-asidi ukuze aqale ukuqhawula i-detonator, wangena ekamelweni leMephu likaHitler, wayifaka isikhwama esinesibhobho esibhekise emlenzeni wetafile, wazithethelela ukuba athathe umnxeba, aze ashiye kwigumbi.
Endaweni yefowuni, uStauffenberg waya emotweni yakhe, kwaye ngo-12:42 ibhomu yahamba. Uthe uStauffenberg wakwazi ukuthetha indlela yakhe yokuphuma kwinqanaba le-Wolf kunye nokuya eBerlin. Nangona kunjalo, uHitler wayengakafi; Enyanisweni akazange akhatywe, kunye nezambatho zokutshisa, isandla esinqunyiwe kunye neengxaki zendlebe. Inani labantu lafa, emva koko, emva kokuphuma, kodwa uHitler wayekhuselwe.
Nangona kunjalo, uStauffenberg wayeyithwale iibhombini ezimbini, kodwa wayenobunzima obunzima bokubambisa ngokubinikezela nje ukuba wayeneminwe emibili kunye nesithupha, kwaye yena nomncedisi wakhe bephazamisekile njengoko bezama ukukhupha, oku kuthetha ukuba ibhomu enye yayisesikhwameni UStauffenberg waya naye eHitler. Elinye ibhomu lakhuphelwa ngumncedisi. Izinto zaza kuba zihlukile ukuba wayekwazi ukushiya amabini amabini ndawonye: Ngokuqinisekileyo uHitler wayeya kufa. U-Reich mhlawumbi wawa emfazweni wembutho ngenxa yokuba abacebi bebengakulungele.
Ukufa kukaHitler kwaba kukuqala kokubanjwa kwamandla, ekugqibeleni, yajika yaba yindawo. I-Operation Valkyrie yayisisigqeba esisisigxina seenkqubo eziphuthumayo, ezivunyelwe nguHitler, oya kutshintsha amandla kwiKhaya leKhaya ukuba aphendule ukuba uHitler wayenakunyulwa kwaye akanakho ukulawula. Abacebisi bacebe ukusebenzisa imithetho ngoba intloko ye-Army yaseKhaya, uGeneral Fromm, wayenesihe kubacwangcisi. Nangona kunjalo, ngoxa i-Home Army yayifanele ibambe iingongoma ezibalulekileyo eBerlin ize isuke ngaphesheya kweJamani ngeendaba zokufa kukaHitler, bambalwa abazimisele ukwenza ngaphandle kweendaba ezicacileyo. Kakade, ayikwazi ukuza.
Iindaba ezazisinda uHitler zaza kuphuma, kwaye iqela lokuqala labacebisi-kuquka uStauffenberg - babanjwe baza badutshulwa. Babenenhlanhla, kuba uHitler wayenomnye umntu odibeneyo odibeneyo wabanjwa, wahlushwa, wabulawa ngokugqithisileyo waza wafa. Unokuba wabukela le vidiyo.
Amawaka abulawa, kwaye izalamane zamanani abalulekileyo zithunyelwa kwiinkampu. UTresckow washiya iyunithi yakhe waza wahamba waya kwiiRashiya, apho wahamba khona i-grenade ukuze azibulale. U-Hitler wayeza kusinda omnye unyaka, de wazibulala njengamaSoviets eza kwindlu yakhe.
Iyiphi iSonto leNkolo?
Ukujonga ngokugqithiseleyo indlu kaFrank Gehry
Iyintoni Injongo yeMidlalo yeTable yeTable-Ping-Pong?
Umlando omfutshane weScientific Revolution
Amasebe eBritish Overseas Territories
54 Iikoleji zeeKholeji ezixabisa i-$ 10,000 okanye ngaphezulu
Izifinyezo zesiLatini: NB Meaning, Uses, Imizekelo
Ukuxhatshazwa kunye neRavish
Liyiphi Iveki Eyingcwele?
Izicwangciso ezingabonakaliyo zokucima iClass
Ngaba Ndifanele ndifumane iSigqeba soShishino?
Imfazwe Yehlabathi II: INgqungquthela yasePotsdam